« Madagasikara misandratra 2030 » : Hiainga amin’ny harena sy fahaiza-manao isam-paritra ny fampandrosoana -
AccueilRaharaham-pirenena« Madagasikara misandratra 2030 » : Hiainga amin’ny harena sy fahaiza-manao isam-paritra ny fampandrosoana
03/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mbola mitana ny sain’ny maro, indrindra ireo mpanara-baovao ara-politika ny seho ataon’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ka nampahafantarany ny « Madagasikara misandratra 2030 ». Mbola nanamafy io vina io izy, ary nametraka fa hiainga amin’ny harena sy ny fahaiza-manao isam-paritra ny ainga ho an’ny fampandrosoana. « Efa manana vina mazava hanohizana ny ho avy hanatevenana ny vita nandritra ny 4 taona isika izao », araka ny fanamarihan’ny Filoha. Ampiana amin’izay lafiny izay ny faritra rehetra. Anisan’ny nasian’ny Filoha resaka ny fambolena, ny indostria, ny harena an-kibon’ny tany sy ny fizahan-tany, ny jono… Niainga teny ifotony no nandrafetana io vina io, narafitra tao anatin’ny herintaona, ary nanaovan’ny Filoha antso avo tamin’ny hery rehetra ny fiarahana misalahy amin’ny fanatanterahana azy. « Tsy hakana mpanjifa intsony ny fanaovana politika hamitaham-bahoaka fa io ny vina, fifanarahana sosialy hiarahako amin’ny vahoaka malagasy », hoy hatrany ny Filoha. Nanamafy ihany koa izy fa « efa nanomboka tamin’ireo asa tokony ho natao ny filoha, ary tsindrindaona amin’ny fanohizana azy. Ny fitiavan-tanindrazana tsy ny anio ihany fa fikatsahana ny ahasoa ny vahoaka sy ny taranaka fara mandimby. Tsy voafetran’ny fotoana izany fa asa atao isan’andro ».
Anisan’ny fototra lehibe hahatanteraka ny vina anefa ny fahatoniana sy ny fahatongavan’ny olom-pirenena saina, miray feno, manana fijery iraisana. « Matoky aho fa manana izany ny vahoaka malagasy », hoy hatrany ny Filoha.